ဘ၀ဇာတ်ခုံ ပန်းမျိုးစုံ: အဇ္ဈတ္တစကားများ
Unknown | 8:31 PM | ဆောင်းပါး
တခြားဘာသာတွေထက် ခက်ခဲခဲ့ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဒီနေ့ အဆင်ပြေပြေဖြေခဲ့ရလို့ စိတ်ထဲက ပေါ့ပါးနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ အဆောင်ကသူငယ်ချင်းတွေစားချင်တဲ့ မုန့်လင်မယားအ၀ယ်တော်ပုံ ထွက်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ ဆွမ်းမကြာမကြာလာလာပို့တတ်တဲ့ ဒကာမနဲ့စကားစမြည်ပြောဆိုရင်း -
`ဖြေနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခါတိုင်းနေ့တွေလိုတော့ ဦးဇင်းအတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့´
´ဟုတ်လား၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ ဟိုတစ်နေ့က ဦးဇင်းသူငယ်ချင်း ဦး….ဆီ ရောက်ခဲ့သေးတယ်၊ သူ့အမေမှာထားတဲ့ ကျောက်ပြင် ၀ယ်ခိုင်းထားတာ ၀ယ်ပြီးလို့ သွားပို့တာပါ၊ ဒါပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ဘုရားကြီးသွားတယ်…တဲ့´
´အော်…၊ စာမေးပွဲတွင်းကို ဘာဖြစ်လို့သွားရတာလဲ ´
´ဘယ်ကိုရင်လဲမသိဘူး သူနဲ့တွေ့မှပဲ မေးကြည့်ဦးမယ်´
ပြောနေကျမဟုတ်တဲ့စကားတွေကို ပြောဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပြောဆိုအပြီး အဆောင်ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းအဆောင်နဲ့ စာရေးသူတို့အဆောင်က တောင်နဲ့မြောက်ဆိုတော့ ခါတိုင်းဆိုရင်တောင် ဥပုသ်နေ့မှရောက်ဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုစာမေးပွဲရက်ထဲသွားဖို့ဆိုတာ ပိုပြီးတောင်ခက်ပါတယ်။ စာမေးပွဲပြီးမှ မေးတော့မယ်ဆိုပြီး ဒီအတိုင်း နေလိုက်တယ်။
သူငယ်ချင်းရဲ့အဆောင်က ဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့တွေ့လို့ အကြောင်းရင်းမေးကြည့်တော့ -´အဲဒီကိုရင်က တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေဖို့ ဒီနှစ်မှ မန်းလေးကိုတက်လာတာ၊ သံလမ်းပေါ်ရပ်ပြီး ဖုန်းပြောရင်း ရထားတိုက်လို့ ပျံတော်မူတာ´လို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးနေတဲ့ ကိုရင်လေးနှစ်ပါးကိုပဲ မြင်နေမိတယ်။ နှမြောမိပေမယ့် အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် သာမန်နှမြောမှုလောက်ပါပဲ။
မနက်မိုးလင်းလို့ သူငယ်ချင်းအဆောင်ကိုသွားပြီး အဲဒီအကြောင်းလေး မေးကြည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ဒီစာကိုရေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာပါပဲ။
´ဟုတ်တယ်၊ ကိုရင်(…) ပြန်တော်မူလို့ပါ´
´ဒီနှစ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေဖို့ မန်းလေးကိုတက်လာတာ၊ ဖြစ်ပုံကတော့ ဘီးလင်းက သူ့ဒကာတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်လို့ ဖုန်းလိုင်းအဆင်မပြေတာနဲ့ ကျောင်းနဲ့နီးတဲ့ သံလမ်းမှာ သွားဆက်တာ၊ အဲဒီမှာ ဖြစ်သွားတာပဲ၊ သူ့ဒကာတောင် သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒကာကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး´
´သူက တပည့်တော်နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်။ ဦးဇင်းရဲ့စာတမ်းကိစ္စနဲ့ ဘားအံကိုရောက်တော့ သူနဲ့တစ်ခေါက် ဆုံဖြစ်လိုက်သေးတယ်လေ၊ သူရော ခုကျောင်းထိုင်နေတဲ့ သူ့အကိုရော တပည့်တော်တို့နဲ့ စာသင်တိုက်မှာ အတူစာသင်ခဲ့တာဆိုတော့ ရင်းရင်းနှီးနှီး သိတာပေါ့´
´ဦးဇင်းကို ပြောမလို့ပါပဲ၊ စာဖြေတဲ့ရက်ဆိုတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောလိုက်တာပါ၊ တခြားသူတွေကိုလဲ မပြောဖြစ်ပါဘူး၊ တပည့်တော်လဲ ခုထိမျက်စိထဲ သူ့ကိုမြင်နေတုန်းပဲ´
´တင်ပါ၊ တပည့်တော် တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ စိတ်မကောင်းတာထက် နှမြောတာက ပိုပါတယ်။ သူ့အကိုဆိုရင် တပည့်လဲဖြစ် ညီလဲဖြစ်တဲ့ သူ့ညီကို အတော်နှမြောရှာမှာပဲနော်´
´နှမြောတာပေါ့။ ဖြစ်ပြီး နောက်နေ့မှာ သူ့အကိုဦးဆောင်ပြီး ကားသုံးစီးနဲ့ တက်လာကြပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ အသင်းက သံဃာတွေ လူတွေက အကူဝတ္ထုငွေထည့်ကြတာ ခုနစ်သိန်းကျော်လောက်ရပါတယ်။ သူ့အကိုက အဲဒီငွေတွေကိုရော သူတို့ဆီက ငွေတွေကိုပါ ထပ်တိုးပြီး အကုန်လှူသွားပါတယ်။ အောင်ချမ်းသာနာမှုကူညီရေး အဖွဲ့က ကူညီပေးပါတယ်´
´တကယ်နှမြောစရာပါပဲ၊ သူက ကွမ်းတော့ အတော်ကြိုက်ပုံရတယ်၊ သူ့ကို နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် တွေ့တုန်းက ကွမ်းစားထားတာ တွေ့ရတယ်´
´ဟုတ်တယ်၊ သူပျံတော်မူပြီး နောက်တစ်ညမှာ ကျောင်းကဦးဇင်းက ကွေကာအုပ်ဖျော်ပြီး သူ့အိပ်ယာမှာ ထားသေးတယ်၊ မနက်မိုးလင်းတော့ အဲဒီဦးဇင်းကို အိပ်မက်မပေးပေမယ့် ကိုရင်လေးတစ်ပါးကို အိပ်မက်ပေးတယ်´
´သူက ကွေကာအုပ်မကြိုက်ဘူး၊ ကွမ်းပဲကြိုက်တယ်..တဲ့´
´ဒါနဲ့ ဆွေးရုံမှာ အဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လား´
´ပြေပါတယ်၊ ရထားတိုက်တုန်းက ချက်ချင်းပျံတော်မမူဘူး၊ ဆေးရုံရောက်လို့ နှစ်နာရီကြာမှ ပျံတော်မူတာပါ၊ သူ့ကိုယ်က လွင့်ပြီး ခဲတွေနဲ့ပွတ်မိ ခိုက်မိတာပဲ ရှိတာပါ၊ ခေါင်းကိုထိသွားလို့ သူပိုဆိုးသွားတာ´
´ဒါပေမယ့်.. တပည့်တော် စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်နေတာ တစ်ခုရှိတယ်´
´ညက ပျံတော်မူတော့ ခေါင်းမှာပဲ ဖြစ်တာပါ ဗိုက်ခွဲတဲ့ဒဏ်ရာမတွေ့ပါဘူး၊ မနက်မိုးလင်းတော့ ဗိုက်ခွဲထားတာ တွေ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ခွဲတာလဲမသိဘူး၊ အမှုအခင်းဘာမှလဲ မဖြစ်ပါဘူး၊ တပည့်တော်စဉ်းစား မရတာက သေပြီးတဲ့လူနာကို သူတို့လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရသလား ဆိုတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ဗိုက်ကိုခွဲတာလဲ..လို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဘာမှရေရေရာရာ မဖြေဘူး၊ တကယ်ဆို ဘာဖြစ်လို့ခွဲတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်း တပည့်တော်တို့ဘက်ကို ရှင်းပြသင့်တယ်လို့ ထင်မိတာပဲ´
´ဟုတ်တာပေါ့၊ အကြောင်းကလေးတော့ ရှင်းပြသင့်တာပေါ့´
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ စကားလေးနည်းနည်းပြောပြီး အဆောင်ကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ အတွေးလေးတွေလည်း ဟိုဟိုဒီဒီပါပဲ။
ဘ၀ဆိုတာ ခဏဆိုမှ တကယ်ကိုခဏလေးပါ၊ ဘယ်အချိန်သေဆုံးရမလဲဆိုတာ မြင်ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲ၊ ချစ်တဲ့သူဆိုတာ ခင်တဲ့သူဆိုတာ တကယ်တော့ တစ်နေ့ခွဲရမယ့်သူတွေပါ၊ အဲဒီခွဲရတဲ့အချိန်မှာ ငါ..သွားတော့မယ်လို့ လူတိုင်းက ဘယ်နှုတ်ဆက်နိုင်ပါ့မလဲ၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ အခြေနေတွေကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးရင်း အဆင်သင့်မဖြစ်ခင် ဘယ်သူက သေဆုံးချင်ပါ့မလဲ၊ ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲ..တဲ့၊ လက်ခံပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေနေတစ်ခုကနေ လုံးဝဆိုးသွမ်းတဲ့အခြေနေကို ရောက်သွားနိုင်တယ်လေ၊ ဥပပီဠကကံ ဆိုတာ ထည့်တွက်စဉ်းစားသင့်တဲ့ စကားတစ်လုံးပေါ့။ ဘယ်စစ်သားမှ စစ်တိုက်ရင်း မကျရှုံးချင်ကြပါဘူး၊ ဘယ်စာမေးပွဲသမားမှ စာဖြေရင်း မကျရှုံးချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်သားက စစ်တိုက်ရင်း သေဆုံးတာ ရှက်စရာမဟုတ်သလို စာဖြေတဲ့သူ စာမေးပွဲကျရှုံးတာ သေရာပါဒဏ်ရာမဟုတ်ပါဘူး။
ဦးဇင်းတို့တစ်တွေဟာ တစ်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကို ဘယ်လိုတစ်ထောင့်တစ်နေရာက ကူညီပေးလိုက်မယ်။ အားလုံးအတွက်မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်တောင် ငါ့ရွာ၊ ငါ့လူမျိုးအတွက် ဘယ်လိုစံပြဖြစ်မယ်။ ဘယ်သူ့အတွက်…ဘယ်သူ့အတွက်…ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်တစ်လှေကြီးနဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြတာပါ၊ အဲဒီလို မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သေဆုံးရခြင်းက မျှော်လင့်ချက်မရှိပဲ သေဆုံးရသူတွေထက်တော့ နိုင်းလို့မရအောင် သာပါတယ်။ လူယုတ်မာအယောက်တစ်သိန်းဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ လွတ်သွားတဲ့ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ဖို့မခက်ပေမယ့် လူကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ လွတ်သွားတဲ့ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ခက်ပါတယ်။
ဒီတော့ သူငယ်ချင်းရေ… ငါတို့ဝေမျှတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေကိုသာ မင်း..ရအောင်ယူလိုက်ပါ။ မနက်တွေ ညတွေ ရောက်တိုင်း ဘုရားရှေ့မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကို အမျှဝေမှာပါ။ အဲဒီတစ်ယောက်မှာ ငါလဲ ပါမှာပါ။ အမျှ… အမျှ… အမျှ… ယူပါ သူငယ်ချင်း။
'Rebirth also is suffering; old age; illness; death; association with unloved; separation from love ones and not to get what one wants, also is suffering; in brief; the five aggregates of clinging are suffering.
The world is suffering and afflicted, no being is free from this bond of misery and this isauniversal truth that no sensible man who sees things in their proper perspective can deny.
မှတ်ချက် = ဘယ်သူမဆို မမျှော်လင့်ပဲ သေဆုံးနိုင်တယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ သတိထားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ရပ်လေးကို ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေခြင်းသာ….။